अमेरिकी नेतृत्व गठ*बन्धन सैनिकले इराकमा खसाल्यो ४० टन ब*म – Everest Pati
अमेरिकी यु*द्ध विमानहरुले इस्लामिक स्टेट समूह९ आईएस० को गढ मानिएको इराकी द्वी*पमा ३६ हजार किलोग्राम (४० टन) ब*म खसालेको छ । अमेरिकी नेतृत्व गठ*बन्धनले टिग्रिसको क्युनस द्वीपमा लेजर–निर्देशित ‘एफ–१५’ र एफ ३५ यु*द्ध*क विमान प्रयोग गरी ब*म खसालेको विदेशी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले जनाएको छ ।
राजधानी बगदादबाट उत्तरमा पर्ने सलाहेद्दिनको मध्य प्रान्तस्थित उक्त द्वीप सन् २०१७ मा आईएसले आफ्नो क*ब्जामा लिएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
करिब डेढ वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी पुनः सुरु गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच दोस्रो दिनको छलफल बुधबार सकिएको छ । मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र पुत्रजायामा भएको संयुक्त कार्यदल९जेडब्लुजी०को बैठकमा नेपाली कामदार पठाउन सुरु गर्नेबारे छलफल भएको हो । यस क्रममा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
‘वार्तामा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका छौं । केही विषयमा सहमति नजिक पुगेका छौं ।’, बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रममन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो,‘ शुक्रबार निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
हेर्दा-हेर्दै सडकले निल्यो कार, कार भित्र रहेका दुई तातोपानीमा उमालिए ! [भिडियो सहित]
धावनमार्गमा रोकेको विमानमा चट्याङ पर्दा…
रियल मड्रिडका पूर्व अध्यक्ष काल्डरनले भने- वेल टोटेनहम फर्कन आवश्यक
फलोअप : कसरी संभव भयो मेघाको पुर्नजन्म ? (भिडियो )